Wiil walaalihiis ku laayay Mareykanka | KEYDMEDIA ONLINE
Wiil walaalihiis ku laayay Mareykanka
Labo wiil oo walaalo ah ayaa sababsaday gacanta walaalkood ka weyn ka hor inta isagana aysan toogan booliska magaalada Kansas.
KANSAS CITY, USA - Magaalada Kansas City, ee gobolka Missouri ee dalka Maraykanka ayaa xalay lagu dilay labo wiil oo walaalo ah kuwaas oo ka soo baxay salaadda taraawiixda, waxayna sabab sadeen gacanta walaalkood ka weyn, ka hor inta booliska magaalada aysan toogan isagana.
Labada wiil ee walaalkood uu toogtay oo la kala yirahdo Cabdiwaaxid Xuseen Cabdicasiis oo 16 jir ahaa iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cabdicasiis oo 14 jir ahaa, ayaa soo tujiyay salaadda taraawiixda ee Masaajidka Al-Taqwa, waxaana albaabka xaafaddooda ku dilay walaalkood ka weyn oo lagu magacaabo Hanad.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay Booliska magaalada Kansas, waxaa laga war galiyay dhacdada abaare 11:00 pm, markii ay goobta yimaadeen kadib, waxa ay isu dayeen in ay la hadlaan Hanad, is fahan waa dhacay kadib Booliska ayaa toogtay, wuxuuna dhaawac soo gaaray dartiis ku geeriyooday Isbitaalka.
Sida uu sheegay Imaamka Masaajidka Al-taqwa ee dhalinyarada xufaadda ah, ka tujin jireen Taraawiixda, Hanad, wuxuu qabay cuqdad, wuxana laga wariyay inuu la noolaa nacayb ka dhan ah dhiinta Islaamka.
Caruurta waxaa gacanta ku heysay eedadood, waxaana hore u geeriyoday waalidkood ‘hooyo iyo aabe’, Sheekh Mustafa oo Imaamka Masjidka ahaa ayaana sheegay in ay aheeyeen, caruun muxaafidul qur’aan ah, oo jamaacada masjidku aad u jecel yihiin.